ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို လူမျိုပေါင်း (၁၃၅ )မျိုးမှာမပါအောင် လုပ်ထားလို့ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို လူမျိုပေါင်း (၁၃၅ )မျိုးမှာမပါအောင် လုပ်ထားလို့
Monday, February 25, 2013 Article, Htay_Lwin_Oo
ရခိုင်ဒေသခံ မွတ်ဆလင်များကို “ရိုဟင်ဂျာ” လူမျိုးရယ်လို့ ခေါ်ဆိုကြောင်း အင်္ဂလိပ်များ ရခိုင်ဒေသကို မ၀င် ရောက်မှီ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး မှတ်တမ်းများကပင် ဖေါ်ပြပြီး ရှိနေပါတယ်။ ဂျာမန်ဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်း များအရ ဒီထက်ပိုစောတဲ့ ခုနှစ်များကပဲ ရှိနေပြီး- ပါရှား အိန္ဒိယ မှတ်တမ်းများအရ ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းထောင် ချီပြီး မှတ်တမ်း များ ရှိနေပါတယ်။
မွတ်ဆလင်များကို ကုလားများလို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တဲ့ စကားအရ ဆိုရင် ရခိုင်ဒေသနဲ့ ရခိုင်လူမျိုး ဆိုတာ ကိုယ်က မွတ်ဆလင်ဒေသနဲ့ မွတ်ဆလင်များကိုသာ ခေါ်ဆိုကြောင်း- သို့မဟုတ် ရခိုင် ဆိုတာ မွတ်ဆလင် များ သာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတစ်ကာ အသိအမှတ်ပြု မြန်မာ့သမိုင်းအကျော် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရဲ့ မြန်မာရာဇ၀င် ပြန်တမ်း အတွဲ ၂ စာမျက်နှာ ၂၁၉ မှာ “ရခိုင် ဆိုတဲ့ လူမျိုးကို ကုလားမျိုး ခြောက် ဆယ့် လေးနွယ်” ထဲမှာ ထည့် သွင်း ရေတွက်ထားခြင်းက သက်သေတည်နေပါတယ်။ ဒီသမိုင်း အထောက် အထား အရ ရှေးမြန်မာမင်းများ ကိုယ်တိုင် ရခိုင် ဆိုတာ မွတ်ဆလင်များ အများစု နေထိုင် ရာ ဒေသ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားလှပါ တယ်။ ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်း ရခိုင်နယ်ကို သိမ်းပိုက်စဉ်က
ရခိုင်ဒေသ မွတ်ဆလင်များ အတွက် တရားရေး ကိုင်တွယ်ဘို့ရာ “ဃာဇီ”များ ခန့်အပ်ထားပေးပြီး ရခိုင်ဒေသ တရား သူကြီး “ဃာဇီ“ အဗစ်ဟူစိန်နီ သခင်ကြီးကို ပင် တာဝန်ပေးခဲ့ကြောင်း သမိုင်းဖျက်လို့ မပျက်နိုင်သေး ပါ။
မြန်မာရဲ့ အောက်ပိုင်း (ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီ) အင်္ဂလိပ် လက်အောက်ကို မရောက်မှီကတည်းက ရခိုင်ရဲ့ မူလဘူတ လူမျိုး မွတ်ဆလင် (မဟာမေဒင်)တွေကို “ရိုဟင်ဂျာ”လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်စဉ်မှာ သူတို့ကို မဟာမေ ဒင်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဒီသမိုင်းကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ။ ဒီသမိုင်းကို ဖျောက်ဘို့ ကြိုး စားသူတိုင်းဟာ အစ္စလာမ်သာသနာကို မလိုတမာ မုန်းတီးသူဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ် မိမိ သက်သေခံနေသူများ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာ အပေါ် ဘာသာရေး စစ် ကြေငြာနေသူများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဖျောက်လိုသူများက “မူဂျာဟစ်” သူပုန်များကို အကြောင်းပြပြန်တယ်။ မူဂျာဟစ် ဆိုတာ ဘာကြောင့် ပေါ်ခဲ့ရသလဲ။ သမိုင်းကို ပြန်လှန်လိုက်ပါ။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဘုန်းကြီးစိန္တာ ဦးဆောင် တဲ့ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မျက်ကန်းများကသာ မွတ်ဆလင်များ အပေါ် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိခဲ့ရင်- မူဂျာဟစ် ဆိုတာ လည်း ပေါ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဘုန်းကြီးစိန္တာရဲ့ ပယောဂ ကြောင့် ရခိုင်တောင် ပိုင်း အလယ်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်ရွာပေါင်း ၃၀၉ ရွာ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့ရတယ်။ ရွာလုံးကျွတ် သတ် ခံရတာများ ရှိသလို- မွတ်ဆလင် များရာ မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောနယ်သို့ ထွက်ပြေး သောင်တင်နေခဲ့ရသူများလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောမှာ လူဦးရေ များနေရ တဲ့ အကြောင်းရင်းက မွတ်ဆလင်လူနည်းစု များ တောင်ပိုင်းမှာ သတ်ဖြတ်ခံရလို့ ထွက်ပြေး သောင် တင်နေတဲ့ အကြောင်းကြောင့်ပါ။ သမိုင်းကို သေသေချာချာ ပြန်လှန်ပါ။
အလားတူ မြောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းလို့ မြောက်ပိုင်းဘက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ အထိနာခဲ့ရတယ် ဆိုတာ လည်း ဖုံးကွယ်မရနိုင်ပါ။ ဒီလို ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းရဲ့ တရားခံက ရခိုင်ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ ခွဲထွက်ရေးသမား တို့ရဲ့ စနစ်၊ အဲ့ဒီ ၀ါဒကို ဦးဆောင်တဲ့ ဦးစိန္တာရဲ့ စနစ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာချင်း ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ လူများစု မြန်မာများက သမိုင်းကို မလိမ်သင့်ပါ။ လူများ တရားနိုင်တဲ့ ခေတ် ကုန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ၁၉၄၂ ခု ဖြစ် ရပ်မှာ ဂျပန်က ပေးလို့ လက်နက်က ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ လက်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဂျပန်လက်အောက် ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ မြန်မာတပ်ထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်သားများမှာ လက်နက်ရှိနေခဲ့တယ်။ လက်နက်ရှိသူနဲ့ လက်နက် မဲ့သူ ဘယ်သူက ပိုပြီး အထိနာ မလဲ- ရိုးရိုးလေး ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
အထိနာလွန်းလို့ ရိုဟင်ဂျာတွေက “လက်နက်စွဲကိုင်ခဲ့ရတယ်။ မူဂျာဟစ် တော်လှန်ရေးသမားတွေ ပေါ်ခဲ့ရ တယ်။” တိုင်းပြည် အေးချမ်းတည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့နေ့မှာ လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ခဲ့ တယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ခွဲထွက်ရေးကို လိုလားမယ် ဆိုရင်– အဲ့ဒီကတည်းက ပွဲပြီးနေလောက်ပါပြီ။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘက်က ခွဲထွက်ရေးကို အညှိမခံ၊ မြန်မာပြည်နဲ့သာ တွဲနေလိုခဲ့လို့-၊ လွတ်လပ်ရေးရစ စိတ်ကြွနေ တဲ့ အချို့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေကရဲ့ စိတ်ကွက်ခြင်းကိုတောင် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို မြန်မာ အစိုးရ ကောင်းကောင်း သိမှာပါ။
၁၉၆၀ မှာ လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်တော့-၊ ရခိုင်ဒေသခံ မွတ်ဆလင်တွေကို (၁) ရခိုင်မွတ် ဆလင် (၂) မဟာမေဒင် (၃) ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အမည်နာမ သုံးခု အနက် တစ်ခုနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဘို့ တင်ပြခဲ့ တယ်။ ဒီမှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူသည်းများက (ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံး မဟုတ်ပါ။ မျက်ကန်း အယူသည်း ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ တစ်ချို့မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။) ရခိုင်ဆိုတဲ့ အခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှအပ အခြားမရှိရလို့ ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရခိုင်ဒေသ ကို မောင်ပိုင်စီး လိုက်ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကို ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက အလိုလိုက် ပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်နာမည် ၂ ခုဖြစ်တဲ့ မဟာမေဒင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကို ဆက်စဉ်းစားပါတယ်။ ဒီမှာ လည်း မဟာမေဒင် ဆိုတဲ့ အမည်နာမက မွတ်ဆ လင်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာက သိတဲ့ နာမည် ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဦးနု အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာ သာ နိုင်ငံကြေငြာဘို့ စိတ်သန်သူ ဖြစ်နေတော့-၊ မဟာမေဒင် လူမျိုးတွေ မြန်မာမှာ ရှိနေတယ်လို့ တရားဝင် အသိမခံချင်တဲ့ သဘောပါ။ (ဦးရာရှစ် ကိုတောင် ဦးရန်ရှင်းလို့ နာမည်ပြောင်း ဘို့ စည်းရုံး ခဲ့ပါသေးတယ်။) ဒီလိုနဲ့ ရခိုင်အယူသည်းများလည်း မကန့်ကွက်ရအောင်၊ မွတ်ဆလင်မှန်းလည်း မသိ ရလေအောင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ရွေးချယ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ (ဦးနုက ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အမည် နာမကို လက်ခံမှ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူ များ ခွဲခြားနားလည်သင့်ပါတယ်။)
ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ ဦးနုလို တရားဝင် အသံလွှင့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကို မထူထောင်ခဲ့ပေမယ့်-၊ အသံတိတ် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက မွတ်ဆလင်အားလုံးကို နိုင်ငံခြားက ကျူး ကျော်လာသူများ၊ ကိုလိုနီခေတ်ကမှ ရောက်လာသူများလို့ စတင်ဆိုင်းဘုတ်တပ်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် တရား ၀င်တိုင်းရင်းသား ဆိုပြီး ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ၁၄၃ မျိုး၊ နောက်ပိုင်း ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ “ရိုဟင်ဂျာ”တွေကို ပယ် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အာဏာနဲ့ တစ်ဘက်သတ် အနိုင်ယူ ဗိုလ် ကျခြင်းမျှ သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဦးနေ၀င်းခေတ်နဲ့ နအဖ ခေတ်များက ပြဌာန်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ စာရင်းမှာ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတာ မပါဝင်ခြင်းဟာ- အာဏာရှင်တို့ရဲ့ သေနတ်ထိပ်ဖျားနဲ့ ရေးတဲ့ ဥပဒေများမှာ မပါဝင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး- အမှန်တစ် ကယ် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မပေးကြောင်း ရိုးသားသူတိုင်း သိမြင်နေပါတယ်။ ဦးနေ၀င်း ခေတ်က ဥပဒေ၊ နအဖ ခေတ်က ဥပဒေ၊ ၂၀၀၈ ခု ဥပဒေများမှာ မပါဝင်တိုင်း အတည်ပြုရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့မှာ အဲ့ဒီ ခေတ်များက ရေးခဲ့တဲ့ ဥပဒေများ ကို ပြုပြင်ပေးဘို့ တောင်း ဆိုမနေ သင့်တော့ပါ။ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ အနေနဲ့လည်း အဲ့ဒီ ဥပဒေများကို ပြင်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီထက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ ဥပဒေများ ပြဌာန်းပေး ပါလို့ တောင်းဆိုမနေသင့်တော့ပါ။ NLD ပါတီ အနေနဲ့ရော၊ 88 မျိုးဆက်အနေနဲ့ရော အဆိုပါ ပြဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ဘို့ တောင်းဆိုနေစရာ မလိုတော့ပါ။ အခုလိုလေး အလိုက်သင့် နေ လိုက်ရင် အန္တရာယ်တောင် ကင်းပါသေးတယ်။
ကိုယ်တွေ မလိုလားတာကျတော့ ပြုပြင်စေမယ်၊ ကိုယ့်အလိုကျ မွတ်ဆလင်မုန်းတီးရေး ကိစ္စမှာတော့ အာဏာ ရှင်တွေ ပြဌာန်းခဲ့တာကို သဘောကျနေမယ်၊ အဲ့ဒီ ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေမယ်-၊ မွတ်ဆလင်တွေ ကို ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်နေမယ် ဆိုရင်တော့–၊ ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွင် ရင်လေးစရာ ကိစ္စမျှသာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မတရားသဖြင့် ဖိလွန်းရင် အရှေ့တီမောလို၊ ကိုဆိုဗိုလို ဖြစ် သွားနိုင်တယ်- ရိုဟင်ဂျာတွေ မတောင်းလိုက် ဘဲ ဆုပြည့်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာလောက်တော့ လိမ်မာ ပါးနပ်စွာ အမြင်ရှိနေဘို့ လိုပါမယ်။ အခု- သေကြေရတဲ့ ပမာဏက – တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ကွဲထွက် သွားဘို့ ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ ပမာဏကို ရောက်လာနေပါပြီ။ ဒါကို ကမ္ဘာက မြင်နေပြီ၊ ပတ်ဝန်း ကျင်နိုင်ငံများက မြင်နေပြီ- ဆိုတာလောက်တော့ အသိပေးပါရစေ။
မိမိကိုယ်မိမိ နိုင်ငံရေး ပရိယာယ်ကြွယ်လှပြီ။ ပညာတတ်လှပြီ ဆိုပြီး ဘ၀င်တွေ စွပ်မမြင့်နေဘို့ လိုပါမယ်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးတွေ အဘို့- မြန်မာတို့ရဲ့ ပညာနဲ့ နိုင်ငံရေး ပရိယာယ်လောက်ကို ပါးပါးလေး– မျှသာ ဖြစ် တယ်- ဆိုတာ လောက်တော့ တွေးပေးဘို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရင်–၊ ဖြစ်လာသမျှ ကိစ္စဟာ ရခိုင်မျက်ကန်းများနဲ့ မျက်ကန်းဗုဒ္ဓ၀ါဒီ များကြောင့် သာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း အသိပေးထားပါရစေ။
Posted by Human Rights
This entry was posted on February 25, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ခရစ်ယျာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊
70 Rohingyas languish in detention here with nowhere to go →